ပရုပ်လုံးနံ့လေး မွှေးနေတဲ့ အဝတ်အထည်တွေရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ် – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeပရုပ်လုံးနံ့လေး မွှေးနေတဲ့ အဝတ်အထည်တွေရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ်
အဝတ်အထည် လေးတွေ ပရုပ်လုးံနံ့လေး သင်းနေအောင်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ရနံ့လေး၊ ပိုးမွှားတွေတက်မှာလဲ မပူရအောင်ဆိုပြီး
ပရုပ်လုံးတွေကို ရှိသမျှ အဝတ်ဗီရို၊ မွေ့ယာ၊ စောင်တွေသိမ်းတဲ့နေရာ၊ သားသား မီးမီးတို့ရဲ့ အဝတ်ခြင်းတောင်း တွေထဲမှာ
ထည့်ကြတာ ဆန်းတာလုပ်လို့ ပြောစရာရှိတယ်။ ဘာများ မှားပြန်ပြီလဲပေါ့။
အင်္ဂလိပ် လို Moth Balls လို့ခေါ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ပရုပ်လုးံလို့ သိကြပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ပိုးမွှား ပြေးအောင် သုံးတာပေါ့လေ။ပါဝင်တဲ့ ဓာတုပေဒ ဓာတ်က Naphthalene နဲ့ Paradichlorobenzene(နပ်ဖ်သလင်း နဲ့ ပါရာဒိုင်ကလိုရိုဘန်ဇင်း)ဖြစ်ပါတယ်။
ပရုပ်လုံးရဲ့အာနိသင်ကိုက တဖြေးဖြေးလုးံပါးပါးပြီး အငွေ့ ပျံတာလေ။ ပျံတဲ့ အငွေ့တွေက အပေါ်က ပြောတဲ့ ဓာတုဓာတ်တွေပေါ့။
စူးစူးရှရှနဲ့ သင်းပျံတဲ ရနံ့လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အငွေ့တွေက သားသား မီးမီး တို့အပြင် လူကြီးတွေရော၊ ကလေးငယ်၊ ဖိုးဖိုးဖွားဖွား အားလုးံရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အဆိပ်ငွေ့ သဘောပါပဲ။
ဖြေးဖြေးချင်း သူလဲလုးံပါးပါးရင်း ကိုယ်ကိုလဲထိခိုက်နေတာပေါ့။အနဲအများပဲကွာတယ်။ သိတောင်မသိလိုက်ကြဘူး။
အဲဒီ အငွေ့တွေက မျက်စိ၊ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း စတာတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာ၊ မူးတာ၊ အန်ချင်တာဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့ လေ့လာမုှတှအရေကငျဆာ အချို့နဲ့တောင် စပဆြကမြုှရှိတယဆြိုပဲ။
နပ်ဖ်သလင်းဓာတ်က ပိုဆိုးတဲ့ အဆိပ်ဓာတ်ပါ။ သွေးနီဥလေးတွေကို အချိန်မတိုင်ခင်ပျက်စီးစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်။
သွေးအားနည်းရောဂါ၊သွေးနီဥတွေပျက်စီးရင်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆက် တွေဖြစ်တတ်တယ်။ G6PD ဆိုတဲ့ အင်ဇိုင်း ခွို့တဲ့မုှရှိသူတှဆေို ပိုပြီးတောင်ထိခိုက်တယ်။ လူကြီးနဲ့ ကလေး ခံရတာချင်း ဘာကွာမလဲ မေးစရာရှိတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ဒီအဆိပ်ဓာတ်တွေကို ကိုယ်ကနေထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့ အားအင်က လူကြီးထက်စာရင်နဲသေးတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပို အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့၊လူကြီးတွေအတွက်လဲ မကောင်းပါဘူး။
ခုခေတ်မှာ ပရုပ်လုးံ ဖြူဖြူလေးတွေတင်မကတော့ဘူး၊ အရောင်စုံ ဒီဇိုင်းစုံ နဲ့ဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံ မျိုးစုံဈေးကွက်ထဲမှာပေါ်နေပါတယ်။ ဗီရိုထောင့်၊ခြင်းထောင်းထောင့်မှာတွေ့ရင်၊ ကြမ်းပေါ်လိမ့်ကျနေတာ တွေ့ရင် သားပိစိ၊ သမီးပိစိလေးတွေက ထုးံစံအတိုင်း ပါးစပ်ထဲ ကောက်ထည့်လိုက်မှာပဲ၊ ဒါဆို ပိုဆိုး။ ဒါကြောင့်သေချာ သိမ်းရတယ်။
ဟုတ်ပြီ အငွေ့က ရှူမိလို့ ရေရှည်မကောင်းဘူးဆိုရင် ပရုပ်လုးံနဲ့ အကြာကြီးထိတွေ့ထားတဲ့ အဝတ်ကို ဝတ်ရင်ရောလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။ အရေပြားကနေ ထိတွေ့တာလဲ မကောင်းပါဘူး။ ဓာတ်တွေက အဝတ်တွေထဲမှာစိမ့်ဝင်ပြီး ရှိနေပါတယ်။ ပြန်လျှော်ပြီး နေလှန်းခြောက်သွားမှ ဝတ်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။
ပရုပ်လုးံမ သုံးရင် အနံ့တွေ ပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ပိုးကောင်တွေပြေးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ပရုပ်လုးံဝယ်ရင် အထက်က ပြောတဲ့ ဓာတုနာမည်ပါတာဆိုရင် ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။ တချို့ပရုပ်လုးံတွေက ထင်းရှူးသားနဲ့လုပ်တာ ရှိတတ်တယ် သုံးလို့ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ရှိမယ်မထင်ဘူး။ ထင်းရှူးသားလေး ထည့်ထားတာမျိုး လုပ်လို့ရတယ်။ အကောင်းဆုးံကတော့ သေချာလျှော် နေပူပူမှာလှန်းလှန်ပေး။ အိတ်လေးတွေနဲ့သိမ်းပေးရင် ပိုးကောင် မွှားကောင်တွေဝင်ဖို့ ခက်သွားပါပြီ။
တချို့ကြတော့ လေးညှင်းပွင့်လေးတွေ၊ ထင်းရှူးသားသန့်သန့်လေးတွေကို အဝတ်အိတ်လေးထဲချုပ်ထည့်ပြီး ဗီရိုထောင့်လေးတွေမှာထားကြတယ်။
ဘာပဲဝယ်ဝယ်၊ ဘာပါဝင်လဲဆိုတာ ဖတ်ပါ။ ထုပ်ပိုးထားတာလေးလှတိုင်း အကောင်းစား မဟုတ်ပါ။ ခုပေါ်နေတဲ့ အမွှေးရည်စတာတွေရဲ့ တခုချင်းဆီမှာ ဘာပါသလဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ အထက်က ပြောတဲ့ ဓာတ်တွေပါလားလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ အတုတွေပေါတဲ့ ခေတ်၊ အတုမျိုးစုံ ကိုယ်နိုင်ငံဝင်လာနေတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော် သတိထားရပါမယ်။ ဒီမှတ်စုလေး ဖတ်ပြီးချိန်မှာ မိဘ တွေစိုးရိမ်ကြမယ်၊ သုံးနေတာ ဘာလုပ်ရမယ် စိတ်ပူမှာပဲ။
ဆက်မသုံးတော့ရင် အကောင်းဆုးံပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ တခုထဲကြည့်ပြီး ပရုပ်လုံးသုံးခဲ့တာကြောင့် တထစ်ချ ပြောမရပါ။ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာပြသ စစ်ဆေးခံယူပါ။